နေ့များ: October 2011
အစကပြန်ကြည့်ကြရအောင်။ ကျနော်တို့ဆီမှာ လူထုဆန္ဒပြနိုင်ခြေဟာဖိနှိပ်ခံထားရတဲ့ကြားကနေ ထိုးထွက်နေဆဲပဲ။ ဒါကို သုဝဏအားကစားကွင်းထဲက ဘောလုံးပွဲအနိုင်ရလိုစိတ်ပြင်းထန်မှုမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ မြန်မာတွေဟာဘယ်နေရာမှာမဆို ရှုံးနေတယ်။ သတင်းတွေဖတ်တော့ တရုတ်ကသူ့ပြည်နယ် တခုအဖြစ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစား နေတယ်တဲ့။ ကုလားကတမျိုး၊ အော်မြန်မာလား အရင်ကငါတို့ လက်အောက်ခံလေလို့ ပြောခံ ရတာ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကို သုံးခါထက်မနည်းကြုံဖူးတယ်။ စင်ကာပူကုမဏီတခုမှာ ကျနော်တို့ဋ္ဌာန အတွက် လူတယောက် အရှေ့အလယ်ပိုင်းကို ကိုယ်စားလှယ်သဘောမျိုးအရင်လွှတ်ဖို့လိုနေတယ်။ ကျနော်အင်တာဗျူး ပြီး မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာ တယောက်ခန့်လိုက်တယ်။ လစာညှိတော့ မြန်မာမို့ဒီလစာတော့ မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုး HR မန်နေဂျာကပြောတယ်။ သူကျနော်မျက်နှာပျက်သွားတာတွေ့လို့ထင်တယ် ဒါငါ့အထက်က သဘောထားလို့ထပ်ပြောတယ်။
ထိုင်းမှာတခါ ကျနော်ပရောဂျက်တခုနဲ့သွားတော့ ဒင်နာတခုမှာ အင်္ဂလိပ်လိုယိုးဒယားသားတွေနဲ့ ပြောတော့ အနားဝိုင်းကရဲက ကျနော်တို့ ၀ိုင်းက ယပက်လက်ကို ဖမာ (မြန်မာကို ထိုင်းကဖမာ လို့ပဲအသံ ထွက်တယ်) လားလို့ မေးပြီးဘာတွေလည်းမသိဆက်ပြောနေတယ်။ ပြောချင်တာက ဒီကောင်ဘာကောင် လည်းပေါ့။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံများခဲ့တဲ့ ရဲကကျနော့်ကို နဲနဲပါးပါး ညှစ်ချင်ပုံရပါတယ်။ ဒါကျနော့်ကိုယ့်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေပါ။ ခင်ဗျားမှာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။
ယိုးဒယားမှာမြန်မာမလေးတွေလုပ်တဲ့ အဓိကအလုပ်ကတွေထဲကတခုက အနှိပ်ခန်းပါ။ သူတို့တွေ ကယပက်လက် ၁၀၉၊ ၁၁၀ တွေကိုယူပြီး ကျွေးထားဖို့ဝန်မလေးကြဘူး။ သူတို့နဲ့ယူမှ ထိုင်းနိုင်ငံသား ခံယူ နိုင်မယ်။ ဒါမှ ကျီးလန့်စားစားဘ၀ ကလွတ်မယ်ဆိုတာတွေကတော့ အဆင်ပြေတယ် ပြောလို့ရတဲ့ ယိုးဒယား ရောက်မြန်မာတွေဆီက ဇတ်လမ်းပဲ။ ဒီထက်ဆိုးတာတွေခင်ဗျားလည်းကြားဖူးမှာပါ။ ကဲဒီလိုဇတ်ပျက်နေတဲ့ လူမျိုးတမျိုးရဲ့ဇာတိမာန် ကိုဘယ်လိုပြန်ထူမတ်မလဲ။
ဆိုတော့ လူထုဟာအခွင့်အရေးကြုံရင် ရုန်းကြလိမ့်ဦးမယ်။ ဒါ ၂၀၁၁ အတွင်းကအတွေ့အကြုံတွေအရ ပဲသုံးသပ်တာပါ။ အိုမန်နဲ့ဘောလုံးပွဲအပြင်၊ အာဇာနည်နေ့ အလေးပြုပွဲ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ဖို့ ဆုတောင်းပွဲ၊ နဲ့ဧရာဝတီ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ဒီအချက်ကိုသက်သေခံနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာရပ်လှိုင်းကို စီးဖို့ဆိုတဲ့လှုံဆော်ချက်မျိုးတွေလုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တာနဲ့ အဖြစ်အပျက်တခုဟာ ဆင်ခြင် နိုင်စွမ်းအားကလွတ်သွားတဲ့ ပွိုင့်တခုထဲဝင်သွားရင် ဇတ်ကနဲထောင်ထွက် လာနိုင်စရာရှိပါတယ်။ အရေးကြီး တာက ခင်ဗျားကဘယ်လိုစသလဲဆိုတာထက် ဘယ်လိုဆုံးသလဲဆိုတာပါ။ နောက်ကွယ်မှာ ပါဝါလေဟာနယ် ရှိတတ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေကို ရှောင်ဖို့ အစိုးရက လူထုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေ စံနစ်တကျ လုပ်ဖို့အခွင့်အရေး ပေးစေချင်တယ်။
တခုပြောချင်တာက ဘယ်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်ကမှ တူနီးရှားပြဿနာနဲ့ အာရပ်နွေဦးကို ကြိုတင် မခန်းမှန်း နိုင်ခဲ့ကြဘူးဆိုတာပဲ။ အဲ ခင်ဗျားကွန်မင့်မှာရေးထားတဲ့ ဒိုမီနိုအကျိုးဆက်မျိုးကို လိုချင်တယ် ဆိုရင် တော့ တရုတ်ကဆန္ဒပြတဲ့အခါမှာတော့ ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိတယ်။ ဟုတ်တယ် တရုတ်မှာဆန္ဒပြရင် အခြေအနေ တွေ အားလုံး ဟာလုံးလုံးလျားလျား ပြောင်းလဲသွားမှာပဲ။ ဖြစ်နိုင်ခြေခင်ဗျားမေးနေတာလား။ ဟုတ်ပြီ တရုတ်ကို အာရပ်ကမ္ဘာနဲ့ နဲနဲယှဉ် ကြည့်ကြရအောင်။
၁၉၉၀ နဲ့ ၂၀၀၀ ဆယ်စုနှစ်အတွက် ကုလသမဂ္ဂကထုတ်တဲ့ လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွှန်ကိန်း (ပညာ၊ ကျန်းမာနဲ့ ၀င်ငွေကိုအဓိက ထားစီစစ်တာ) မှာ တူနီးရှားဟာ ၃၀%တက်လာပြီး အီဂျစ်ဟာ ၂၈% တက်လာတယ်။ နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဘွဲ့ရပညာတတ်တွေပိုများလာတယ်။ အသစ်ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့ တိုးတက်တဲ့အခြေအနေတွေဟာ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးစံနစ်ဟောင်းထဲ ကျဉ်းကျပ်နေခဲ့တယ်။ ညိနေတယ်၊ လှုပ်ရှားရတာမလွယ်ဘူး။ အလုပ်ကောင်းတနေရာရဖို့ အဆက်အသွယ် ရှိဖို့က အဓိကဖြစ်နေတယ်။ ဒီတော့ ဒီဘောင်ကို ချဲ့ရတော့တယ်။ အာရပ် ပညာတတ်၊ နည်းပညာနဲ့အကျွမ်းတ၀င်ရှိတဲ့ လူလတ်တန်းစား တွေက ပြီးခဲ့တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အဓိကအချက်ပဲ။
တရုတ်မှာ ၂၀၁၁ နှစ်ဦးက တက္ကသိုလ်တခုကထွက်လာတဲ့ အစီရင်ခံစာတခုမှာ ၂၀၁၀အတွင်း လူမှုမတည်ငြိမ်မှု ၇၂ ခုရှိခဲ့ တယ်လုိ့ဖော်ပြတယ်။ တရုတ်လိုမီဒီယာကို ချုပ်ထားနိုင်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ ဒီကိန်းဟာ ဒီထက်ပိုများနိုင်ပြီး သတိထားရမဲ့ အနေအထားပဲ။ တရုတ်ဒေသအာဏာပိုင်တွေဟာလည်း အကြီးအကျယ် ခြစားနေကြတာပဲ။ ကျနော်သိတဲ့ပြည်မကြီး ကလာတဲ့ တရုတ်တော်တော် များများကို နဲနဲပါးပါးစကား ပြော ကြည့်ရင် တရုတ်မှာနေရာတိုင်းလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမကင်း ဘူးဆိုတာပဲ။ ပိုက်ဆံသာပေးနိုင်ရင် ဘာမဆို အကုန် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတယ်။ ကွန်ဖျူးရှပ်ကို ကိုကာကိုလာ တိုက်ပြီး မက်ဒေါ်နယ်ကြော်ညာရိုက်ခိုင်းလို့ရတယ် ဆိုတာ မျိုးပေါ့။
နယ်တွေမှာလယ်တွေသိမ်း၊မြေတွေသိမ်း၊ လူထုကို နေရာတွေရွှေ့ပြောင်းပြီး အာဏာပိုင်တွေက ကုမဏီတွေကို လုပ်ကွက်တွေပေးတယ်။ ကုမဏီတွေဟာဆောက်ချင်သလို ဆောက်တယ်၊ သူတို့စွန့်ပစ်ပစ္စည်း တွေကို စံနစ်တကျတွေဘာတွေလုပ်မနေဘူး။ လက်ရှိရေပေးရေးစံနစ်တွေထဲလည်း လစ်ရင်လစ်သလို သူတို့ စွန့်ပစ် တဲ့ရေတွေ ထဲ့ချင်ထဲ့ချလိုက်တာမျိုးတဲ့။ ကံကြီးလို့ မြစ်ဆုံဆည်ခနရပ်ထားဖြစ်တာ ဆိုပေမယ့် တရုတ်နဲ့ လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းမှန်သမျှဟာ သတိထားရမှာချည်းပဲ။ သူတို့ဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ တောင်ထင်ရာလုပ်တာ ဆိုတော့ ကျနော်တို့ဆီမှာဆိုရင် ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ တရုတ်မှာ အာဗာတာ ရုပ်ရှင် ပြတော့ တောသား တွေက သောက်သောက်လဲကြိုက်ကြဆိုတယ်။ သူတို့နယ်မြေတွေကို လုယုဖျက်စီး ခံရတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက အဖြစ် ဟာ သူတို့ဘ၀နဲ့ တူတာကိုး။
လက်ရှိတရုတ်ချမ်းသာမှုဟာ ကမ်းခြေဒေသ နဲ့မြို့ကြီးတွေ မှာပဲရှိတယ်။ တရုတ်မှာ ဒေသတခုနဲ့တခု ဆင်းရဲချမ်းသာအရမ်းကွာသွားပြီ။
ဒါပေမယ့် ပညာရှင်တွေ ပြောသလိုပေါ့။ ခုခေတ်မှာ တော်လှန်ရေးကို ဆင်းရဲသားတွေကမလုပ်ဘူး၊ လူလတ်တန်းစားပညာတတ်တွေက ပဲလုပ်မှာဆိုတာကို တရုတ်အစိုးရကသိတယ်။ တရုတ်မှာ အာရပ်လိုဘွဲ့ရပြီး သစ်သီးလှည်းနဲ့တွန်းရောင်းရတဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေမပေါ်အောင်ထိန်းထားတယ်။ တရုတ်ပညာတတ် လူလတ် တန်းစား ဟာ ဆူပါမားကက်ကြီးတွေထဲ ပျော်နေကြတယ်။ တရုတ်ပညာတတ်တွေမှာ အလုပ်လက်မဲ့ တွေရှိတယ် ဆိုပေမယ့် အများစုဟာ လက်ရှိဘ၀ကိုကျေနပ်နေကြတယ်။ အိုင်ဖုန်းတို့၊ အိုင်ပက်တို့၊ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ် အ၀တ်အစား၊ အသုံးအဆောင် တွေမှာ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေ ကုန်သွားကြတယ်၊
ပြီးတော့ တရုတ်မှာ မူဘာရက်တို့ ဘင်အလီတို့ ကဒါဖီတို့လို အာဏာကိုရေရှည်စွဲကိုင်ထားတာ မျိုးမရှိတော့ဘူး။ ဟူဂျင်တောင်ဟာ နောင်နှစ်ဆိုရင်ဆင်းပေးပြီ။ ခေါင်းဆောင်အပြောင်းအလဲမှာ ပေါ်လစီ အကူးအပြောင်း တွေရှိတတ်တော့ လူထုကိုနဲနဲတော့စောင့်ကြည့်စေတယ်။ ပြီးတော့ PLA (people liberation army) ဟာဘက်ပြောင်းပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုဘက်ကို ကူးပြောင်းဖို့ ဘာအရိပ်အရောင်မှမရှိဘူး။ ဒီအချက်တွေဟာ တရုတ်မှာလူထုအုံကြွမှုတွေ အချိန်တိုအတွင်းမှာဖြစ်ဖို့မရှိဘူးလို့တော့ညွှန်ပြနေတာပဲ။ အင်ပါယာဘ၀ကနေ တရုတ်တွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အိမ်နိမ့်စံအဖြစ်နဲ့ အနောက်ရဲ့ ကျောသပ်ရင်သပ်ခြင်းကို ကျိတ်မှိတ်ခံလာ ခဲ့တယ်။ ခုတော့သူတို့ဟာ ၂၀၀၆မှာ ကမ္ဘာ့တတိယစီးပွားအင်အားကြီးနိုင်ငံ ဂျာမနီကို ကျော်တက်၊ ၂၀၁၁ မှာ ဂျပန်ကို ရာဇ၀င်ထဲမှာထားရစ်ခဲ့တယ်။ ဒီနှုန်းအတိုင်းသွားရင် ၂၀၃၀မှာ နံပတ်တစ် နေရာကို အမေရိကန်တွေ ဆီကယူကြလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် တရုတ်အာဏာပိုင် တွေဟာ အနာဂတ်ကို ထွက်ပြေးနေကြတယ်။ အရမ်းဖြစ်ချင်နေကြတယ်။ စီမံကိန်းအမှားတွေ အများကြီးလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုအများကြီးထိခိုက်စေခဲ့တယ်။ အဲဒီထဲက တခုဟာ အမြန်ရထားလိုင်းတွေပဲ။ တရုတ်အာဏာပိုင်တွေ ကုမဏီတွေကနေလာဘ်စားပြီး ဒီစီမံကိန်း တွေကို နည်းပညာမသေချာခင် အလျှင်အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြတယ်။ တရုတ်အမြန်ရထား နှစ်စီးဟာ ၂၀၁၁ ဇူလိုင် က ဗဟိုထိန်းချုပ်ခန်းကမသိတော့ ရထားတွေကို သတင်းမပေး နိုင်တော့ တခါတိုက်တယ်။ လူတွေ အများကြီးသေတယ်။ စက်တင်ဘာမှာ တခါတိုက်ပြန်တယ်။ ပြိုလဲနေတဲ့ အပျက်အစီးပုံတွေကြား မျက်ရည်တွေ ၀ဲနေတဲ့ ၀မ်ကျားပေါင်ကို ဟီရိုးဖြစ်စေတဲ့ ဇီချွမ်ငလျှင်ဟာ ဆည်တည် ဆောက်ခဲ့တဲ့ အကျိုးဆက်လို့ ခုတချို့တွေ က ဆိုလာကြပြီ။
အင်ပါယာအိမ်မက်ကို မမက်ပါဘူးလို့ပြောထားပေမယ့် တရုတ်စိတ်ထဲမှာဘာရှိသလဲ အားလုံးက စိုးရိမ်နေကြရပြီ။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ တရုတ်ဟာ ဗီယက်နမ်နဲ့စစ်ဖြစ်ဘူးတယ်။ ချန်ကေရှိတ်တပ်တွေ မြန်မာပြည်ထဲဝင်ဘူးတယ်။ ခုဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ကမ်းလွန်ရေနံမှာ လိပ်ခဲတင်းတင်းရှိတယ်။ ခေတ်မှီမှုနဲ့အတူ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ဟာ အရမ်းအရေးကြီးလာတယ်။ တရုတ်နဂါးဟာ ကမ္ဘာပတ်ပြီးရေနံနဲ့ ဓါတ်ငွေ့ဈေးကွက် တွေထဲဝင်တယ်။ နိုင်ငံပိုင် CNOOC (China National Offshore Oil Cooperation) ဟာအမေရိကန်ကုမဏီ ယူနိုကယ်ကို ၂၀၀၅ မှာဝယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ယူနိုကယ်ဟာ တိုတယ်နဲ့အတူမြန်မာ ကမ်းလွန်ရတနာမှာ ရှယ်ယာတွေရှိနေပါတယ်။ အာရှအလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ယူနိုကယ်ရဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ အကျိုးစီးပွားဟာ တရုတ်စွမ်းအင် မဟာဗျူဟာနဲ့ လိုက်ဖက်ပုံရပါတယ်။ ဒီတော့ အမေရိကန်မှာ ဒီမိုကရက်နဲ့ ရီပတ်ပလီကန်ဟာ ချက်ချင်းညှိပြီး ယူနိုကယ်ကို အမေရိကန်ကုမဏီချင်းဖြစ်တဲ့ ရှယ်ဗရွန် လက်ထဲ ထဲ့ခဲ့ကြတယ်။ ဒါ့အပြင် ခုတရုတ်တွေ ကျနော်တို့ ဆီမှာ ရေကာတာတွေနဲ့ ကမ်းလွန်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ နဲ့ စွမ်းအင်စီမံကိန်းတွေကို ခြေသွက် လက်သွက် စာချုပ် တွေချုပ် ထားကြပြီ။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဘက်ကကြည့်ရင် တရုတ်ဟာပြည်တွင်းအခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ရင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဒုတိယအချမ်းသာ ဆုံးဖြစ်နေပါပြီ။ သူနဲ့အတူ G-20 ရဲ့နောက်တက်လာတဲ့ ဘရာဇီး၊ ရုရှား၊ အိန္ဒိယ၊ တောင်အာဖရိက တို့ဟာတကယ်များ နောင်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းသစ်ကို သြဇာညောင်းလာမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဟာ ဒေါင်ဒေါင်မည် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကိုပဲ ပိုလို့အခြေခံလာကြပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ကော ဘာလုပ်ကြမလဲ။ တရုတ်ကိုကန်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးပေါ်လစီဟာ အမျှော်အမျှင်နဲရာ ကျတယ်လို့ အနဲဆုံး ခုနေမှာပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မကန်နိုင်ရင်တောင် မှီထားဖို့မသင့်တော်ပါဘူး။ ကျနော် တို့ အနောက်ကိုပြန်ကြည့်ကြရမယ်။ အိန္ဒိယသွားပြီး ဗုဒ္ဓဂါယာ ဘုရားဖူးတာ လေးတွေလုပ်သလို ဒေသတွင်း အာစီယံနဲ့ လည်း ချိတ်ထားရပါလိမ့်ဦးမယ်။ အစိုးရကသာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံးလွှတ်ပေးလိုက်စမ်းပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ အာစီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာ ကျနော်တို့အကျုိုးစီးပွားပါ။ ထောက်ခံရမယ်။
ပိတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံကို ကမ္ဘာကြီးထဲဖွင့်ထုတ်ပစ်ရမယ်။ ပြည်တွင်းအတိုက်အခံတွေ စုစည်းညီညွတ်ကြဖို့ ဆိုတာထက် အတိုက်အခံနဲ့အစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံးစုစည်းညီညွတ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး တခုဖြစ်ဖို့ လိုလာ ပါပြီ။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားချင်း မပြေလည်ခင်မှာသဘောတူထားခဲ့ရတဲ့ စီမံကိန်းအမှားတွေကို ပြန်ပြီးချင့်ချိန်ပြီးပြင်ဆင် ပစ်ရပါမယ်။ ပျက်စီးလာနေတဲ့ ဂေဟစံနစ်တွေကိုကယ်တင်ရတော့မယ်။ မြန်မာပြည်အသက်ဟာ ၁၅နှစ်လောက် ပဲရှိပါတော့တယ်။ ၂၀၂၅ လောက်အထိ ကျနော်တို့သာ ဒီအခြေ အနေ ကနေ တိုးတက်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုရင် ဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့ အခြေအနေတခုကို ပြန်ရောက်သွားမယ် ဆိုရင် မြန်မာပြည်ဟာနောက်တခါ လွတ်လပ်ရေး ကို ဆုံးရှုံးရဖို့ ပါပဲ။ မြန်မာတွေ ဒလိုင်းလားမားတို့လို ရုန်းကန် ကြရပါလိမ့်မယ်။
ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ အပေါ်မှာကျနော်တို့အုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီးကြည့်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ပထမအုပ်စုဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အားလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးရေးဟာစနေပြီလို့ ယူဆကြည့် ချင်ပါတယ်။ နှစ်မကုန်ခင် လွှတ်ပေးတာကို ပြီးအောင်ကိုလုပ်ရပါမယ်။ ပြီးရင်အင်အယ်ဒီပါတီ တရားဝင်ဖြစ်ရေး (မှတ်ပုံတင်ရေး)မှာ အစိုးရက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အတွင်းထဲကို သွင်းတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘာတွေဆွေးနွေးဖို့လိုမလဲ။ ဒီနေရာမှာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနိမ့်ဆုံး အဆင့်အတန်းကိုပေးဖို့တော့ အနဲဆုံး လိုအပ် ပါတယ်။ Dahl ပြောတဲ့ အနိမ့်ဆုံးဒီမိုကရေစီမှာ အချက်လေးချက် ရှိရပါမယ်။
၁။ လွတ်လပ် ပြီး မျှတတဲ့ ပုံမှန်ရွေးကောက်ပွဲတွေရှိရမယ်။
၂။ အရွယ်ရောက်သူ နိုင်ငံသားအားလုံး မဲပေးခွင့်ရှိရမယ်။
၃။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို၊ ပုံနှိပ်၊ ထုတ်ဝေ၊ အသင်းအပင်းများဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိရမယ်။
၄။ ရွေးကောက်ပွဲအရမဟုတ်ပဲ အခွင့်အရေးတခုနဲ့ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသူများမရှိဖို့လိုတယ်။
လောလောဆယ်မှာ နံပါတ်၂ ကလွဲလို့ကျန်တာအားလုံးအားနည်းချက်တွေရှိနေပါတယ်။ နံပါတ် ၃ကို ပေးဖို့အားယူနေတယ်လို့ကျနော်ထင်ပါတယ်။ နံပါတ် ၄ ကတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံက တပ်မတော်သား ၂၅% ကိုပြင်မှ သာရနိုင်ပါမယ်။ အစိုးရကဒီအချက်ဟာပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့လက်ခံပြီးသားလို့ထင်ပြီး ညှိနှိုင်းစရာဟာ အချိန်ပဲလို့ယူဆပါတယ်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီအချက်၎ ချက်ပြည့်စုံ ရေးနဲ့ညီမယ်ဆိုရင် အင်အယ်ဒီ မှတ်ပုံတင် ရေးဟာမလုပ်နိုင်စရာမရှိပါဘူး။ အင်အယ်ဒီဟာ ဒီ၂၅% နေရာကို ၂၀၁၅ မှာဝင်မပြိုင်ဘူးဆိုခဲ့ရင်တော့ ပိုများ ညှိရတာလွယ်မလားပဲ။ လက်ရှိအစိုးရဟာ မဲဆန္ဒနယ်ရဲ့ ၂၅% မှာ အဓိကပြိုင်ဘက် အင်အယ်ဒီ မပါဘူး ဆိုရင် နံပါတ် ၁ ဟာလည်းဖြစ်လာနိုင်တာပါပဲ။
အပေါ်လေးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို အင်အယ်ဒီသာတရားဝင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီဆိုရင် ၉၀ရလဒ်ကို ပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ၂၀၁၅ မတိုင်ခင်ကြားခံကာလမှာ သဘောတူထားတဲ့ Political Order တခုမရှိပဲ လက်ရှိအစိုးရဟာ စီးပွားရေးကို ကိုင်ရင် မောင်ပုံစောင်းကြိုးပြတ်မှာပဲ။ တပြိုင်နက်တည်းမှာ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုကို တဆင့်ချင်းဖြည်ချဖို့ကြိုးစားမယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုယူထားနိုင်ရပါမယ်။
ခင်ဗျားဟာတွေကတော့ ideal တွေပဲပြောရင်ကျနော် မငြင်းပါဘူး။ သို့သော်ဒီလိုပဲစိတ်ကူး ကြည့်ရ မှာပါပဲ။ တိုက်ယူမှရမယ်၊ တောင်းယူမှရမယ်ဆိုရင်လည်း တိုက်ကြတောင်းကြပေါ့။ လက်ရှိဖြစ်ထွန်းမှုကို နောက်ပြန်သွား တာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိဖြစ်စဉ်မတော်လို့ ဘာအကြောင်းကြောင့် ပဲဖြစ်ဖြစ် လန်ကျသွားခဲ့သော် မူလဒုံရင်းကပြန်စကျိုးစားရတာမျိုးမဖြစ်အောင် တနေရာမှာပြန်ထစ်ထားနိုင်တဲ့ Physical Mechanism တခုလည်းရှိဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ အဲဒါဟာဘာဖြစ်သင့်သလဲ။ နှစ်ဘက်စလုံးက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်လိုသူတွေသေသေချာချာစဉ်းစား ရမဲ့အချက်တချက်ပါပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည်ပြောခဲ့တာတခုရှိတယ်။ ဆင်းသွားတဲ့အစိုးရကိုလည်းဘာဒုက္ခမှမပေးရဘူးတဲ့။ ဒါဟာ နိုင်ငံအာဏာကိုစွန့်လွှတ်သွားတဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပူပန်မှုဆိုရင် သူတို့ကို ကျနော့် ညာဏ်တထွာနဲ့ တခုပြောချင်တယ်။ အာဏာရှင်တွေကို အာမခံချက်ပေးနိုင်တာ ဟာနောက်ထပ် အာဏာရှင် မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းမွန်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံတခုကသာပေးနိုင်တာပါ။ အဲဒီပုံစံကို အခုရအောင် တည်ယူကြ ရအောင်ပါ။
ကျနော်တို့ လူမျိုး ဆင်းရဲတာ၊ သိက္ခာမဲ့နေတာ၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံ ကျနော်တုိ့မသိပဲ အနိုင်ကျင့်ခံရတာ ရောင်းစားခံရတာကြာပါပြီ။ ကျနော်တို့အခုပြောင်းမှဖြစ်တော့မယ်။ အချိန်သိပ်မရှိတော့ဘူး။ အပြောင်းအလဲကို အစိုးရကလက်ခံပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ပါမှ လွယ်မယ်၊ မြန်မယ်။ အခြေအနေက မလုပ်ရင်မဖြစ်တော့ဘူး။
တရုတ်ဟာသီအိုရီမရှိတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပုံသဏာန်တခုကိုစမ်းသတ် နေတာပါ။ အဲဒါဟာ ဗဟိုအာဏာ ချုပ်ကိုင်မှု နဲ့ ဈေးကွက်စီးပွားရေးပဲ။ ဗဟိုကချုပ်ကိုင်ပြီး အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်လို့ရနေတော့ စီးပွားရေးမှာ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေ ရှိနေတာ မဆန်းပါဘူး။ တရုတ်အစိုးရဟာ နည်းပညာမသေချာသေးခင် သူ့ပြည်သူ တွေစီးနင်းနေတဲ့ ဗဟိုထိမ်းချုပ်ခန်းနဲ့ လွတ်ထွက်သွားတတ်တဲ့ အမြန်ရထားတွေကို စမ်းသတ် မောင်းနှင်နေဆဲပဲ။
သူ့နိုင်ငံကမ္ဘာ့အဆင့်တစ် နိုင်ငံဖြစ်လာမလား။ လူမှုမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ ပြန်လည်ထွက်သွား မလား ဆိုတာ ကျနော်တို့တွေ့ကြရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီရလဒ်ပေါ်မှာ ကျနော်တို့ လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ အချုပ်အချာ အာဏာကို လောင်းကြေးထပ်မထားနိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့မှာ ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးခွင့်၊ သတ်မှတ်ခွင့် ရနေတယ်ဆိုရင် အားအားယားယားဗျာ ဘာလို့ဘောလုံးကွင်းထဲသွားပြီး အော်ဆဲနေကြမှာလဲ။ ဘယ်သူက လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြဖို့တွေ တွေးနေမလဲ။
သုဝဏကွင်းထဲက အော်သံတွေ ကျနော်တို့ဘယ်အထိကြားရဦးမလဲ။
- Linkages between politics and economics by Nelson Joan M. Journal of Democracy, October 1994
- Civil-Military Relations and Democracy Edited by Larry Diamond and Marc F. Plattner, The John Hopkins University 1996
- Elections without democracy, The Rise of Competitive Authoritarianism by Steven Levitsky and Lucan A. Way. Cambridge University Press, April 2010
- The impact of the economic crisis, from the G-8 to G-20 by Mark F. Plattner. Journal of Democracy. Jan’ 2011
- Can Europe be saved? By Paul Krugman. International Herald Tribune. Jan 12’ 2011
- Is China next? By Francis Fukuyama. International Herald Tribune. March 15’ 2010
- China’s high-speed politics by David Bandurski. International Herald Tribune. July 28’ 2011
Posted by KZကေ at 23:51 No comments:
Posted by KZကေ at 22:20 No comments:
ကျနော်ပြန်ရေးဖို့ရှိပါတယ်။ ကျနော်သုဝဏကို နံပါတ် ၇ မှာသိမ်းနိုင်မယ်ထင်တယ်။ ပြန်ရေးချင်တာတချို့လည်းနောက်ပို့စ်တွေထဲပါသွားမယ်ထင်တယ်။
ပြီးတော့သုဝဏဟာကျနော့်အတွက်ကျတော့ ဟိုး ၃လပိုင်းလောက်ကတည်းကရေးလာတဲ့
နိဒါန်း၊ ကြားခံကာလကုန်ဆုံးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အင်အား သီးခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မဟာဗျူဟာ၊ စီသုံးလုံးနဲ့မီးသုံးထောင့်ဆိုတာတွေနဲ့လည်းဆက်စပ်နေပါတယ်။
တခုရှိတာက ကျနော်ရေးနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးဟာပြောင်းနေတယ်။ ကျနော်ရေးတဲ့အချိန်ကြာတော့ စာရေးပုံလေယူလေသိမ်းတွေကရေးချိန်မုဒ်ပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းသလို ဇောင်းပေးရေးချင်တာတွေကလည်းအခြေအနေတွေအရပြောင်းနေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်ယုံကြည်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေးပြန်ကောင်းလာဖို့နဲ့ နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်သွားရမဲ့နည်းနာတွေကတော့မပြောင်းလဲသလောက်ရှိနေပါတယ်။
လောလောဆည် ခင်ဗျားရေးတဲ့ ကွန်မင့်တွေကိုကျနော်လက်ခံခြင်း၊ ငြင်းဆန်ခြင်းထက်စာရင် ခုလိုအပြုသဘော စံနစ်တကျပြန်လည်ဆွေးနွေးလာတာဟာ ကျနော့်အတွက်တော့အားတခုပါ။
အခြားကြုံလို့ပဲဖြစ်စေ၊ တမင်ပဲဖြစ်စေ ဒီပို့စ်တွေကို ဖတ်နေသူတွေလည်းခုလိုရေးလာမယ်ဆိုကျနော့်မှာဆင်ခြင်နိုင်စရာ၊ ပြန်လည်ဆွေးနွေးစရာတွေရှိလာလိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်။
Posted by KZကေ at 21:24 No comments:
Posted by KZကေ at 23:347comments: